Nrụpụta osisi na osisi nke China | Zhanyu
· Ọkọlọtọ: DIN / ASTM
· Nha: m6-m12
· Tụkwasịnụ Ikike: Tọn 200 kwa ọnwa
· Oge nlele ： 3-5days
· Mentkwụ ụgwọ usoro: T / T, L / C.
Ihe nkedo osisi, nke a makwaara dị ka nkụkọ osisi, yiri nke igwe, ma ihe nkedo a bụ ihe nkedo osisi pụrụ iche, nke nwere ike ịgbanye ya n'ime osisi (ma ọ bụ akụkụ) iji jikọọ akụkụ metal (ma ọ bụ nke na-abụghị nke). ya na oghere site na ime osisi. Kinddị njikọ a nwekwara ike iwepụ.
Uru nke nkụkọ osisi bụ na ọ nwere ikike nkwado siri ike karịa ịgha ntu, enwere ike wepu ya ma dochie ya, nke anaghị emebi oke osisi ma dịkwuo mfe iji.
Commondị osisi kposara ndị a na-ahụkarị bụ ígwè na ọla kọpa. Dabere na ntu ntu ahụ, enwere ike kee ha n'ime ụdị isi okirikiri, ụdị isi dị larịị na ụdị isi oval. Na ntu isi ike ga-kere n'ime slotted ịghasa na cross slotted ịghasa. N'ozuzu, a na-eji ígwè dị nro ma na-acha anụnụ anụnụ mee ihe nkedo gburugburu. Ewepụghị isi ịghasa. The oval isi ịghasa na-na-plated na cadmium na chromium. Ọ bụ mgbe iji wụnye rụrụ akwukwo, nko na ndị ọzọ ngwaike ngwa. A na-ekpebi nkọwa ahụ site na dayameta na ogologo nke mkpanaka na ụdị isi ntu ahụ. Igbe ahụ bụ unit nke ịzụta.
E nwere ihe abụọ di iche iche nke sikruuokwomoto maka wụnye osisi kposara, otu ziri ezi na ndị ọzọ bụ obe, nke dabara maka uzo udi nke osisi ịghasa isi. Tụkwasị na nke ahụ, e nwere onye ọkwọ ụgbọala pụrụ iche arụnyere na nkụ ụta ahụ, nke kwesịrị ekwesị maka ibudata na ibudata kposara osisi buru ibu. Ọ dị mma ma na-azọpụta ọrụ.
Nke gara aga: Hex isi mkpọpu ala kposara
Osote: Riagegba ụgwọ
China handan hebei ọkọnọ Concrete arịlịka Drop -...